घरमा सलोन स्टाइल फेसियल कसरी गर्ने - PAMPEREDPEOPLENY.COM - सुन्दरता
कसरी घर मा एक सैलून शैली चेहरे गर्न
घर सुन्दरता छाला हेरचाह छाला केयर ओआई-रिद्धि रोय द्वारा रिद्धि डिसेम्बर,, २०१। मा
प्रत्येक महिना वा सलुनमा जान धेरै मानिसहरु लाई लक्जरी हो। तर के यसको मतलब यो हो कि व्यक्ति जो वास्तवमै सैलुनमा जान सक्दैनन् उनीहरूले छाला लाडको एक बिट छोड्नु पर्छ? हामी तपाईंलाई घरैमा सैलून स्टाइल फेसियल कसरी गर्ने भनेर बताउने छौं।
यो भनिन्छ कि तपाईको जीवनमा निश्चित समय पछि तपाईले नियमित फेशियल गरिरहनुपर्दछ। आदर्श यो तपाईको २ turn बर्ष पछि नै हुनुपर्दछ, र तपाईले हरेक महिना एक पटक अनुहार पाउनुपर्दछ। तर सबैजनाले यो सस्तो गर्न सक्दैनन्, वा उनीहरूसँग प्रत्येक महिनाको पार्लरमा जाने समय र धैर्यता हुँदैन।
यसैले घरमै सलोन स्टाइल फेसियल कसरी गर्ने भनेर जान्नु महत्त्वपूर्ण छ। तपाईं आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ कि यसले तपाईंको अनुहारमा कत्ति फरक पार्छ। तपाईंको छाला पहिले भन्दा बढी खुशी हुनेछ।
त्यसो भए, तपाई कसरी घरमै एउटा सलुन स्टाइल फेसियल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ छ। तपाईं यो गरेर धेरै पैसा र समय बचत हुनेछ!
१. स्वच्छ अनुहार:
सफा अनुहार भनेको त्यो हो जुन तपाईसँग सुरु गर्नुपर्नेछ। तपाईं या त यसको लागि तेल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, वा तपाईंको नियमित अनुहार धुनुहोस्। विचार अनुहारबाट सबै मेकअप र धूलोका स signs्केतहरूबाट छुटकारा पाउन हो।
मृत छाला कोषहरू बाट छुटकारा पाउन मद्दतको लागि तपाईंको छाला एक्स्फोलिएट गर्न होममेड स्क्रब प्रयोग गर्नुहोस्। पाउडर चिनी र मह प्रयोग गरेर थोरै पानीको साथ उत्तम घर बनाइएको स्क्रब राम्रोसँग बनाउन सकिन्छ। जब तपाइँ आफ्नो अनुहार धुनुहुन्छ सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ सबै स्क्रब हटाउनुहुन्छ।
Face. अनुहार मसाज:
औंलाहरुसंग तपाईंको अनुहार बिस्तारै मालिश गर्नुहोस्। यसले अनुहारमा रक्त संचार बढाउँछ, जसले छालालाई स्फूर्ति दिन्छ र बुढेसकाल र झिम्काका स prevent्केतहरूलाई रोक्न मद्दत गर्दछ। विशेष गरी मुनि आँखा क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्, किनकि यो क्षेत्र सुक्खा देखिन्छ र चाँडो बुढेसकालका लक्षणहरू देखाउँदछ।
तपाईंको अनुहार स्टीमिंग गर्दा pores खोल्न मद्दत गर्दछ pores मा अडिएको थियो कि अशुद्धियों को छुटकारा पाउन। यसले तपाईंलाई स्वस्थ चमक पनि दिन्छ। तपाईं जडिबुटी स्टीम बनाउनका लागि कुनै पनि आवश्यक तेलको केही बूढा थप्न सक्नुहुन्छ।
Face. अनुहारको मास्क:
सादा, कच्चा महले सबै छालाका प्रकारहरूको लागि राम्रो प्रकारको अनुहारको मास्क बनाउँदछ। यो प्रकृतिमा नमीयुक्त र एन्टि-ब्याक्टेरिया हो। यी बाहेक, तपाईं कुनै पनि स्टोर खरीद गरिएको फेस मास्क पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, यदि तपाईंलाई चाहनुहुन्छ भने।
एक पटक तपाईको मास्कमा कुल्नुहोस्, एक टोनर प्रयोग गर्नुहोस्। यसलाई कपासको बल प्रयोग गरेर तपाईंको अनुहारमा लगाउनुहोस्। यसले pores लाई आफ्नो सामान्य आकारमा फिर्ता संकुचन गर्न मद्दत गर्दछ, र अनुहारको pH स्तर फिर्ता ल्याउन।
तपाईंको अनुहारलाई नमीमा राख्नु नै तपाईंको छालाको प्रकारको फरक पर्दैन, जे भए पनि यो तेल है। मॉइश्चराइजरलाई तपाइँको छालामा समाहित हुन दिनुहोस्।
शरीर सौष्ठव को लागि प्रोटीन युक्त भारतीय खाना
हिन्दू पौराणिक कथामा निद्राका देवता
भगवान कृष्ण सम्बन्धित घर नाम
भारतमा चमकदार छालाका लागि उत्तम फेस प्याक
कसरी कन्नडामा भंगीब्याठ पाउडर तयार गर्ने
खैरो कपालका लागि नरिवल तेल र निम्बूको रस